यसकारण जेल जाने पक्का! – All top Here
Home/समाचार/यसकारण जेल जाने पक्का!
रोशनी शाहीले किटानी जाहेरी दिएको भए निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्थे । किटानी जाहेरी आएमा पक्राउ गर्ने भनाई नेपाल प्रहरीबाट आइसकेको थियो । तर, रोशीनले किटानी जाहेरी दिइनन् । आफूमाथि जर्ब जस्ती भएको दाबीसहित मिडियामा भनाई बाहिर ल्याइन् । तर, कानुनले मिडियामा दिएको बयानलाई मुख्य प्रमाण मान्दैन । घटनाको प्रकृति र घटनास्थलको प्रमाणलाई मुख्य मान्छ । त्यसबाहेक ज र्ब जस्ती भएको हो होइन फोरेन्सिक जाँच हुन्छ ।
यदि रोशनी शाहीले महरालाई आरोप लगाएको हो भने यो घटनामा उनी दोषी छिन् । महराको चरित्र ह त्या भएको छ । यदि रोशनीले झूटको खेती गरेकी हुन् भने महराको पदसमेत जानेगरी चरित्रह’त्या गर्ने रोशनीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । कानुनले कसैमाथि झुटो विषय पेश गरेर चरित्रह’त्या गर्ने या संवेदनशील जर्ब जस्तीको आरोप लगाउनेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौंमा ह’तियारसहितका चिनियाँ सेना तैनाथ
मधेसी जनता ‘गो ब्याक इन्डिया’ नाराका साथ सडकमा